Global Voices teny Malagasy » Shina: Mampatahotra ny miseho amin’ny tena anarana amin’ny aterineto · Global Voices teny Malagasy » Print
Shina: Mampatahotra ny miseho amin'ny tena anarana amin'ny aterineto
Voadika ny 14 Mey 2009 11:15 GMT 1	 · Mpanoratra Bob Chen Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Shina, Fahalalahàna miteny, Hafanàm-po nomerika, Hevitra, Teknolojia
Lasa sehatra manan-danja fanaovan'ny olona politika sy fitsikerana mpitondra ny aterineto any Shina. Voaantoky ny fanafenana anaran'ny mpampiasa azy amin'ny ankapobeny ny fahalalahan'ny aterineto. Na izany aza dia tsy nitsahatra mihitsy ny fitadiavana hanohintohinana io fahalalahana io. Vao tsy ela akory izay dia nosamborina  noho ny fiampangany ny tompon'andraiki-panjakana tao amin'ny toerana nisy azy ho manao kolikoly ny tovolahy iray any Shanghai. Ny tena mahatalanjona amin'ity raharaha ity dia nandeha an-jatony kilaometatra mihitsy ny polisy tany an-toerana hisambotra azy rehefa fantany ilehio fa mpamaham-bolongana.
Ankehitriny dia tarataratra fa te-hanao ezaka mihoatra io voalaza io ihany koa ny mpitondra ao Hangzhou. Vao nolanian'ny antenimiera tao an-toerana fa tsy maintsy manoratra ny tena anarany avokoa ny mpampiasa aterineto rehetra ao an-toerana ary tafiditra amin'izany ihany koa ny mpamaham-bolongana.
Nalaza tamin'ny aterineto nandritra ny andro vitsivitsy izay ny lahatsoratr'i  West-of-Lake-West. Nohazavain'ny bolongana tamin'ny antsipiriany tanaty lahatsoratra vitsivitsy ny lalàna vaovao izay hampiharina manomboka ny voalohan'ny volana mey. Nantsoina hoe ‘Fehezan-dalàna ho fiarovana ny fanomezam-baovao an-tsolosaina sy an'aterineto’ (计算机信息网络安全保护管理条例) ny volavolan-dalàna izay nolanian'ny antenimieran'ny tanàna.
Hitan'ny mpamaham-bolongana ao amin'ny andininy faha-18 fa
Tsy maintsy raiketin'ny mpanao tolotra an'aterineto an-tsoratra ny ora, ny laharana, ny IP ary ny laharan'ny sofin-davitry ny mpampiasa aterineto.
Manontany ny mpamaham-bolongana:
Te-hanontany aho hoe raha mividy akanjo any amin'ny mpivarotra ve aho dia tsy maintsy raisina ny anarako sy ny adiresiko ary ny laharan-karapanondroko? Misy dikany ve izany? Lazao ahy ny antony. Efa nanontany ny hevitrao ve ianao amin'ity lalàna ity?
Avy eo dia navoakany ihany koa ny andininy faha-19:
Tsy maintsy mahazo ny mombamomba ny mpanara-baovao an-tserasera, lalao an-tserasera ary ny fifampitan-kafatra mivantana ny mpanao ireo tolotra ireo. Ny tafiditra amin'ity lalàna ity dia ny fanaovana dinika, karajia, famoaham-baovao ary ny bolongana.
Fa ny andininy hitany ho fahadalàna indrindra dia ity:
Tsy manara-dalàna ny mandrisika ny olona hanao fanehoan-kevitra misompatra ny hafa, ny fiainana manokan'ny hafa, na mitsikera ny hafa amin'ny alalan'ny resaka an-kolaka na fanendrikendrehana.
Nataony fanalana azy ny andinin-dalàna:
Tiako anontaniana ny manam-pahaizana ny hamaritana ny atao hoe ‘fanehoan-kevitra misompatra’ araka ny lalàna vaovao ampifanarahina amin'ny fototry ny famoahan-dalàna? Raha miteny aho hoe, misy bandy ratsy matavy manana anaram-bositra hoe Wang eto Hangzhou. Miresaka momba ny tompon'andraikitra voalohan'i Hangzhou izay matavy sy manana anaram-bositra hoe Wang ve aho?
Farany dia nolazainy fa mpandika lalàna izy aorian'ny voalohan'ny volana mey satria
Raiso tsara, tena mandika ny lalàna mihitsy ity lahatsoratra ity! Voalohany tsy nilaza ny mombamomba ahy aho, faharoa ‘mandrisika ny fanehoan-kevitra misompatra’ aho ary fahatelo, miteny ankolaka olona matavy aho. Misy miteny fa Wang A io, ny hafa manonona fa Wang B io ary ny fahatelo miteny fa i Wang sekreteran'ny Antoko io….ka iza amin'ireo no izy?
Ahoana no hiainanay ity lalàna ity? Amin'ny fomba ahoana no hitabatabanay rahampitso? Mahazo mitsikera ny rehetra ve isika? Iza no manome antoka ny zonay hitaraina?
Miantso vonjy ny mpiserasera rehetra manerana ny firenena izahay.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2009/05/14/2300/
 Bob Chen: https://globalvoicesonline.org/author/bob-chen/